June 12th, 2014 कविता No Comments »
May 31st, 2014 पुस्तक-समीक्षा No Comments »
आज कवि–लेखकलाई बजारसत्ताले छपक्कै छोपिसकेको छ । धुरन्धर थुप्रै लेखकहरु पुँजीवादको बाहुपासमा बाँधिन पाएर मख्ख छन् । तर, वाई.एन.चौलागाँई शरणार्थी मानिसहरुका कथाका माझबाट हिँडिआएका छन् । उनी लेखनमा विल्कुल नयाँ हुन् । साहित्यको बजारसत्तासँग उनी जानकार पनि छैनन् । न त साहित्यसँग उनको अर्थपूर्ण सङ्गत नै छ । तैपनि, उनले आख्यानबाटै साहित्यमा हाम फाल्ने साहस गरेका छन् । ‘साक्षी’ वाई.एन. चौलागाँईको पहिलो कृतिका रुपमा भर्खरै प्रकाशनमा आएको छ । लेखनमा उनको यो पहिलो हस्ताक्षर हो ।
चौलागाँई झापाको एक दैनिक पत्रिकामा नियमित स्तम्भ लेख्छन् । यसबाहेक उनको लेखनमा दोस्रो चिनारी थिएन । नेपाली साहित्यसँग उनको सङ्गतै भएन पहिले । लेखक, पुस्तकको बजासत्ताबाट अलग्गै रहेका व्यक्ति हुन् उनी । पेशाले एक सफल व्यापारी । जीवनको २८ बर्षको समय उनले भुटानमा बिताए । त्यहाँ रहँदा आफू बसेको जिल्लाको वाणिज्य संघको जिम्मेवार तहमा बसेर काम गर्ने अवसर पाए उनले । नगर विकासको समितिमा मत्वपूर्ण पदको जिम्मवारी पनि सम्हाले । सामाजिक कार्यमा पनि आफूलाई सहभागी गराए । पछि बहुदल पुर्नबहाली भएसँगै उनी नेपाल भित्रिए । नेपाल आउँदा उनी एक सफल व्यावसायीका व्यक्तिका रुपमा आए । त्यसबेलासम्म उनी आफ्नै निजी जीवनसँग मात्रै सिमित थिए ।
न्यायका पक्षमा कविता
यामबहादुर भुवाँजी अर्थात्, सङ्गीतश्रोता । युवासुलभ जोस र क्रान्तिकारी उर्जाका साथ समाज र देश बदल्न जनयुद्धको वैचारिक अंश बोकेर हिँडेको एउटा जुझारु युवा हुन् ! जो रेडियो÷एफएम पुस्ताका कवि हुन् । पत्रकार हुन् । उनको नामलाई हेर्दा सङ्गीतप्रतिको आकर्षण झल्किन्छ । सायदै सङ्गीतप्रतिको अथाह प्रेम र सङ्गतले उनलाई यो नाम जुटाइदियो । झट्ट सुन्दा र पढ्दा पनि भिन्दै लाग्ने नाम रोजे उनले– सङ्गीतश्रोता ।
नेपाली साहित्यको समय अहिले आख्यानमय बनेको छ । साहित्य र पुस्तक बजारमा आख्यानात्मक कृतिहरुले गतिलोगरी प्रभाव जमाइरहेका छन् । सबैतिर आख्यानकै हाईहाई छ । र, अन्य विधाको स्पेस खुम्चिँदै गइरहेकोजस्तो देखिन्छ । तैपनि, कविताहरु लेखिँदैछन् । राम्रा कविहरु छाइरहेकै छन् । राम्रा कविताहरु खोजी–खोजी पढिँदैछन पनि । यो कवि र कविताप्रतिको विश्वास हो । यही विश्वासको लहरमा उभिएका छन् युवापुस्ताका रम्रा कवि, सङ्गीतश्रोता ।